Sénégal : Ireo antom-pahatezerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Febroary 2012 7:43 GMT
Miaraka amin'ny vanim-potoana mafampàna mialoha ny fifidianana izay iainan'i Sénégal, dia atrehan-dry zareo Senegale koa izao ny fanaovana tsinontsinona ny demaokrasia ka mampanahy ny maro amin'ireo mpanaramaso herinandro vitsivitsy aty alohan'ny fifidianana.
Ndeha hampahatsiahivintsika fa i Abdoulaye Wade dia lany ho filohan'ny firenena tamin'ny 2000 ary nanapa-kevitra izy fa mbola hirotsaka indray ho aminà fotoam-pitondràna fanintelony na dia voararan'ny lalam-panorenana aza izany. Marobe ireo Senegale nanohitra ny fanapahan-kevitra mamela azy ho afaka mirotsaka indray. Betsaka ireo singa mampanahy ireo mpifidy ao Sénégal.
Fatou Diop dia mametraka ho eny aloha ny amin'ny hoe i Wade no mpirotsaka be taona indrindra eran'izao tontolo izao :
Ny zavatra tsy azo lavina dia tsy manam-paharoa ao anatin'ny raki-tahirin'ny tantaran'izao tontolo izao izany : Me Abdoulaye Wade eo amin'ny faha….86 taonany, dia mpilatsaka hofidiana amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena hatao ny 2012 ho aminà fotoam-pitondrana haharitra 7 taona . Eny antsisin'ireo adihevitra politika amin'izao fotoana dia mipetraka ny fanontaniana momba izay handimby azy, maro no miahiahy ny fikatsahany fotoam-pitondràna fanintelony mba hamindràna ny fitondrana ho any amin'ny zanany lahy.
Abdoulaye Wade, hatramin'ny nahatongavany teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2000 dia miasa mba hitànana ny fahefana. Langangui dia miverina amin'ny resaka hoe i Wade no ilay olon'ny fanovàna fony izy voafidy. Saingy tsy nisy voatàna ireo fanomezan-tokiny ary dia tahaka ny efa tsy tazana intsony izay fotoam-panovàna :
Vantany vao lany izy tamin'ny 2000, natosiky ny, izany no noeritreretina, faniriana tsara mba hanova ny lalampanorenana izy. Andininy iray mametraka ny fe-potoam-piasàna ho dimy taona hisolo ilay fito taona tany aloha, milaza fa ny fotoam-piasan'ny filoha « dia indray mandeha ihany no azo havaozina» no lany. Dia nihevitra ny tsirairay fa na i Wade koa aza dia tafiditra ao anatin'io fepetra io na dia efa herintaona tany alohan'ny nitondrana fanovàna ilay andininy tao amin'ny lalam-panorenana aza izy no voafidy. Tsy izany ihany fa tamin'ny 2007, taorian'ny fahalaniany, dia nanambara ampahibemaso izy fa tsy hirotsaka hofidiana intsony.
Kanefa, niverina tamin'ny teniny i Wade ary nilaza fa hirotsaka hofidiana hisolo ny tenany ihany amin'ny 2012.
Tsy fahafantarana tsara an'ilay zalahy io izany. Teny anelanelany teny, tamin'ny 2008, dia nampanova ny lalam-panorenana indray izy mba hamerenana ilay izy ho fito taona azo havaozina indray mandeha (arakareo tsara an ?), talohan'ny tsy nahombiazany tamin'ny taona lasa tamin'ny andrana iray hafa hampanova ny lalam-panorenana, izay nikendrena ny hikarakarana fifidianana ny ho filoha aminà fihodinana tokana monja, anatinà rafitra ” ticket présidentiel ” manaraka ny fomba Amerikana (dia hanolotra sarintsarinà filoha lefitra daholo ny mpirotsaka tsirairay, ka i Wade dia hirotsaka miaraka amin'ny zanany lahy Karim, ohatra). Fotoam-pitondràna roa araka izany, ny iray fito taona ary iray hafa dimy taona izay efa hifaràna, nefa tiany hitarina indray ho fito taona vaovao hafa.
Rehefa ampahatsiahivina an-« drazokiny be » ny fanomezan-toky nataony fa hoe tsy hirotsaka intsony, dia hoy ny avaliny « Ma Waxoon ? Waxeet » (« niteny an'izay aho, sintoniko izany ») » amin'ny teny wolof, ilay teny be mpampiasa indrindra ao amin'io firenena io.
Babacar NDiaye no manipika ny lova tsy mifindra mivandravandra ataon'i Wade mametraka ny zanany lahy Karim amina toerana maro manan-danja ao amin'ny governemanta .
Ny zavatra tena nanamarika ny « fotoana nitondran'i » Wade dia ny vahoho nataon'ny zanany lahy tamin'ny fanjakana. Mbola io zanany lahy io ihany izay tsy nanao tatitra mihitsy mikasika ny fitantanany ny ANOCI, ary taorian'ny fahareseny sarotra adinoina nandritra ny fifidianana tany an-toerana tamin'ny 2009 [tao amin'ny biraom-pifidianana nisy azy indrindra anefa] , notendrena ho eo amin'ny toeran'ny Minisi-panjakana izay mijabaka amin'ny asan'ireo ministera hafa rehetra. Fanampin'ny nanendrena azy ho minisitry ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena izay tsy hafa fa fanaparitahana ihany ny ministeran'ny Raharaham-Bahiny, dia mbola izy no minisitry ny angovo, ny fitaterana an-habakabaka sy ny fotodrafitrasa. Dia izy noho izany no eo amin'ny lohan'ny « governemanta amin'ny endriny bitika» ao anaty governemanta foibe. Amin'ny fomba «Wade manokana», inona moa fa tsy fanaovana ho « pied de nez » an'ireo Senegale izay nanao izay hampihisatra ny fisidinan'ilay « Printsy » miezaka ny ho fantatra sy ho tiam-bahoaka. Ny antony naroson'i Wade momba ny nanomezana « ministera goavana » toy izany ho an'ny zanany lahy dia hoe izy nahavita « fiofanana manokana sy tsy dia misy mpanao ». Nahazo diplaoma tany Sorbone izy, mikasika ny resaka fitantanana sy fitsirihana (..) Io fanaovana lova tsy mifindra io izay efa nokianin'ny mpanohitra sy ny teny an-dalambe no nanosika ihany koa an'ilay mpihira Youssou NDour hametraka ny firotsahany hofidiana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny 2012. Fihetsika izay rasiny ho toy ny adidy manoloana ireo mpiray tanindrazana aminy.
Manohy i Fatou Diop :
Tamin'ny Jona, dia niezaka indray izy ny hipasopasoka ny raharaha tao : fanovàna iray izay afaka ny hahalàny avy hatrany ny filoha sy ny filoha-lefitra iray aminà isam-bato faran'ny ambany 25% amin'ny vato manan-kery amin'ny fihodinana voalohany. Fanodinkodinana izay pitik'afo nandrehitra ny vanja. Nipoaka ny korontana mahery setra tao Dakar ary nihemotra tamin'ny fikasany i Wade nony farany.
Azavain'i Langangui fa hoe i Wade dia nampiasa fitaovana maro mba hampanekena ny fahafahany mirotsaka :
Mikasika ny fanakanana avy amin'ny lalam-panorenana tsy hirotsaka aminà fotoam-pitondrana fanintelony, dia nanakarama volabe mpahay lalam-panorenena avy any ivelany izy. Tamin'ny fanontaniana hahalalàna na tafiditra tao anatin'ny valan'ny fanovàna ny lalampanorenana na tsia ny fahalaniana voalohan'i Wade tamin'ny fifidianana tamin'ny 2000, fanovàna izay lany ny 2001 ary mametra ho roa ihany ny isan'ny fotoam-pitondrana mifanesy, dia mazava ho azy fa tsia no navalin'ireto farany. Kanefa Senegale dimy mpahay lalam-panorenana – izay mpikambana tao amin'ny komity mpamolavola sy ny lalam-panorenana ny iray – no samy nihevitra fa io fepetra io dia tokony koa hihatra amin'ny filoha mpirotsaka hofidiana. « Ny fanahy sy ny voasoratry ny Lalam-panorenana dia mandràra ny firotsahana fanintelon'i Wade. Izany no antony tsy maintsy hanakànanay ny fametrahany ny firotsahany hofidiana», hoy ny nambaran'i Mounirou Sy, mpampianatra lalàna ao amin'ny Anjerimanontolon'i Dakar…
Io adihevitra io dia vao avy notapahan'ireo « olon-kendry dimy avy amin'ny Filan-kevitry ny Lalam-panorenana», izay samy i Wade avokoa no nanendry azy ireo. Ireto farany no nanambara ny Zoma 27 janoary fa ny filoha avy nahavita ny fotoam-pitondrany dia afaka mirotsaka, miaraka aminà mpirotsaka telo ambinifolo hafa, amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin'ny 26 Febroary ho avy izao, izay manafoana ho azy ny firotsahan'ilay mpihitra Youssou Ndour (Ny Filan-kevitry ny Lalam-panorenana dia nilaza ny antony fandavany tsy hankato ny firotsahan'i Youssou Ndour ho noho ny nahitàna fa izy ” dia nanolotra lisitra misy mpifidy 12.936 manohana ny firotsahan-kofidiany, izay 8.911 monja no azo nohamarinina hatramin'ny soniany”, raha toa ka 10.000 no isa farany ambany tsy maintsy ilaina).
Henjana be ny fiantraikan'ilay vaovao, indrindra fa tany amin'ireo tanora tao Dakar. « Raha toa i Wade mandray anjara amin'ny fifidianana, dia tsy hisy fifidianana izany eo. Raha toa ny mpikambana ao amin'ny Filan-kevitry ny Lalam-panorenena mankatoa ny firotsahany, dia izy ireo no ho tompon'andraikitra amin'izay hitranga eto Sénégal» hoy ny fampitandreman'ny mafàna fo iray mpiaro ny zon'olombelona.
Ao amin'ny pejiny Facebook ny Hetsiky ny 23 Jona dia manazava ny anton'ny mahatezitra :
Tsy mpanankarena izahay, tsy manana solika, na volamena, na diamondra….fa kosa nanana foana ny fandriampahalemana, ny voninahitray, ankehitriny dia menatra i Sénégal…inona no anton'izay rehetra izay… satria ho an'i Wade, tsy maintsy i Karim Wade no filoham-pirenena… tsy misy hanaiky an'izay velively eo.
Hatramin'izay, ireo hetsi-panoherana manohitra ny firotsahan'i Wade dia niteraka fatiolona 8 izay polisy ny iray ary ankizivavy kely iray, ary ankizivavy kely iray hafa no poaka maso an'ila.
Abdoulaye Wade dia manamaivana ireo hetsi-panoherana izay tondroiny ho “rivotra malefaka mitsoka” araka izay lazain'i Vincent Hugueux ao amin'ny bilaoginy.
Ny Hetsika 23 Jona, na Mouvement du 23 Juin izay nanao famorian'olona ny 11 sy 12 Febroary dia nanapa-kevitra fa manomboka ny Talata 14 Febroary dia hobodoin'ireo mpanao hetsi-panoherana ny kianja Obélisque , ary tsy hiala eo mandra-pisinton'i Wade ny firotsahany hofidiana.
Heverina hatao ny 26 Febroary izao ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana, ireo mpirotsaka avy amin'ny mpanohitra, afa-tsy iray monja, dia samy nanapa-kevitra ny hampiato ny fampielezan-kevitr'izy ireo hatramin'ny 16 Febroary ary mety hifandinika amin'ny antoko PDS (antokon'ny filoha Wade)